ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနက ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း အတွဲ (၆၉)၊ အမှတ် (၄၈)၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်ထုတ် စာစောင်ကို စာပေဗိမာန် စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုတစ်ပတ်ထုတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် အပိုင်း (၁)၊ အပိုင်း (၂) နှင့် အပိုင်း (၄) တို့ ပါရှိပါသည်။
အပိုင်း (၁) တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ကြေညာချက်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (ဝန်ကြီးရုံး) အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန (ဝန်ကြီးရုံး) အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊
အပိုင်း (၂) တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးအမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊
အပိုင်း (၄) တွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ကြော်ငြာစာ၊ ရွှေနေပြည်တော်ထွန်း ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Shwe Nay Pyi Taw Tun Gem & Jewellery Company Limited)၊ စိမ်းလန်းရတနာမြေ ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Sane Land &adanar Myay Gem Company Limited)၊ ကျောက်စိမ်းလဲ့ဖြာ ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Kyauk Seinn Latt Phyar Gem Company Limited) တို့၏ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀၆(၁) အရ ကုမ္ပဏီကိုအစုရှယ်ယာရှင်များ ဆန္ဒအလျောက် ဖျက်သိမ်းရန်ကြော်ငြာခြင်း၊ ပန်းဥယျာဉ်ရှုခင်းဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် (PARKVIEW SERVICE CO., LTD.)၊ တောက်ပတိုးပွားသော အထည်ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် (SHINNIN GACCESS GARMENT MANUFACTURING COMPANY LIMITED.) တို့အား (အစုရှင်များ၏ ဆန္ဒအရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း) နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း၊ ဘုန်းရောင်ခြည်စက်မှုနည်းပညာ ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို အစုရှင်များ၏ ဆန္ဒအလျောက် ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ရိုင်းဇင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (RISING TRAVES & TOURS COMPANY LIMITED)၊ တယ်လ်မိ ကမြူနီးကေးရှဲန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (TEL ME COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED) တို့၏ အစုရှင်များ၏ ဆန္ဒအရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း၊ Auto Net Travels Company Limited. အလိုအလျောက် ကွန်ယက် ခရီသွားလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၀၆(၁)အရ ကြော်ငြာစာ တို့ ပါဝင်ပါသည်။